3 shaqaale gargaar oo lagu af-duubay Soomaaliya - Sabahionline.com
Laba qof oo Keenyaan ah iyo dhakhtar Soomaali ah ayaa Soomaaliya lagu af-duubay Arbacadii (11-kii Juulaay), sidaana waxa sheegay bilayska.
Booliiska Puntland oo ku-daba jira raadinta shaqaale gargaar oo la af-duubay
Shaqaalihii gargaarka ee la soo furtay oo soo gaaray Kenya
Ciidamada ammaanka Kenya oo ku daba-jira dadkii wax qafaashay
Shaqaale gargaar oo la af-duubay iyo dareewal la dilay
Af-duubka ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Gaalkacyo, oo dhacda xudduuda dawlad-goboleedka waqooyiga ee Puntland iyo kan Galmudug.
"Laba muwaaddin oo u dhashay Kenya iyo dhakhtar ka soo jeeda deegaanka ayaa la af-duubay, wararka ugu horreeyana waxa ay carabaabayaan in af-duubayaashu ahaayeen burcad-badeed, laakiin wali waxaanu baaraynaa dhacdada," ayuu Adan Warsame, oo ah sarkaal ka tirsan bilayska Gaalkacyo u sheegay AFP.
Maxamed Ciise Xasan, oo ah sarkaal kale oo bilays ah, ayaa sheegay in ay af-duubkaas ku dhaawacmeen darawal iyo laba qof oo waardiye ahaa.
Saddexda qof ee la qafaashay ayaa u shaqeeynayay hay'ad gargaar oo aan dawli ahayn oo laga leeyahay Sweden laguna magacaabo International Aid Services. Hay'adda ayaa hadal ay ka soo saartay Sweden ku xaqiijisay af-duubka, haseyeeshee ku sheegtay kuwa la qafaashay in ay yihiin saddex qof oo laga keenay Kenya.
Kani waa af-duubkii labaad oo lagula kaco shaqaalaha gargaarka bil gudaheed, kadibaf-duubkii loo gaystay afar shaqaale oo ka tirsan Golaha Qaxootiga Nowray oo laga af-duubtay xerada Qaxootiga Dhadhaab ee Kenya todobaadkii hore.